WARARKA BARAAWEPOST Arbaco 8 august 2012<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oobooqday xerada la dejiyay ciidanka Booliska ee ka socda dalka Uganda
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/gaas Shariif Sheekhuna Maye o uu weheliyo taliyaha ciidanka Boolsiak ee AMISOM Dr Charles Makono ayaa shalay ku booqday ciidnka Booliska AMISOM ee ka socda dalka Uganda xeryaha ay ku jiraan.
Ciidamadan Booliska ee AMISOM ee ka socda dalka Uganda oo tiradoodu gaareyso illaa iyo 140 askari ayaa ah dafcaddii ugu horeysay ee soo gaarta magaalada Muqdisho waxaana maalmaha dhow ee foodda nagu soo haysa la filayaa inay iyana magaalada soo gaaran ciidamo kale oo Boolis ah oo ka kal socda dalalka Sierra Leone iyo Djibouti.
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/gaas Shariif Sheekhuna Maye ayaa halkaas salaam sharaf kaga qaatay ciidamadan isla markaana uga jeediyay halkaas qudbad isugu jirtay soo dhoweyn iyo dardaaran.
Ciidamadan booliska Midowga Afrika ee dhawaan soo gaaray Muqdisho ayaa sida la qorsheeyay bilaabi doona inay ka howlgalaan qaar ka mid ah sladhigyada Booliska eek u yaala magaalaada Muqdisho isla markaana ay gacan ka siin doonaan ciidanka Boolsiaka howlgalada lagu sugayo amniga.
Ciidamadan ayaa waxaa ay wataan dhamaan qalabkii ay ku howl gali lahaayeen oo ay xitaa ku jiraan gawaarida gaashaaman waxaana maalmaha soo socda la geyn doonaa saldhiyada kala duwan eek u yaala magaalada Muqdisho.
Booliskan ayaa waxay isugu jiraan saraakiil, dabley iyo ciidamao dambi-baarayaal ah, waxayna ciidamada Booliska Soomaaliyeed ka caawin doonaan dhamaan howlgalada kala duwan ee ay u xilsaaran yihiin.